Somali - Roger Steinkamp For Senate
• SADDEX XUL AH Codbixinta
• YAA AHAY
• ARIMAHA MUHIIM AH:
1. Daryeelka caafimaadka
4. Isbedelka Cimilada
5. Caddaalad dhammaan
SADDEX XUL AH CODBIXINTA
1 – Boosto ugu dir ama u gey axkamadda
(haddii aad horay u haysatay warqad cod-bixin ah)
2 – Tag goobta cod-bixinta November (UGUFIICAN)
Hubso inaad ogtahay halka aad aadeyso.
Raadi MEELKAAGA CODSIGA
3 – Tag maxkamada oo ka codee
Inta lagu jiro maalinta shaqada iyo 10:00 AM
3:00 PM Sabtida doorashada kahor.
Waxa la sameeyo haddii aanad diiwaangashanayn
① Aqoonsi leh magaca iyo cinwaanka hadda
• Liisanka darawalnimada ansaxsan ee Minnesota, oggolaanshaha bartaha ama Aqoonsiga; ama rasiid mid ka mid ah kuwan.
• Aqoonsi Qabiil oo leh magac, cinwaan, sawir iyo saxiix.
② Aqoonsiga Sawirka iyo dukumiinti leh magac iyo cinwaan hadda jira
AQOONSADA AQOONSIGA SAWIRADA
(XULO MID) Aqoonsiga waa dhici karaa
o Liisanka wadista, Aqoonsiga gobolka ama ogolaanshaha bartaha ee ay bixiso gobol kasta
o Baasaboorka Mareykanka
o Aqoonsiga Milatariga Mareykanka ama Halyeeyga
o Aqoonsi Qabiil oo leh magac, saxiix iyo sawir
o Jaamacada Minnesota, kuliyada ama Aqoonsiga kuliyadaha farsamada
o Aqoonsiga dugsiga sare ee Minnesota DUKUMENTIYADA LA ANSIXIYAY (MID KALIYA)
Waxaa lagu tusi karaa qalabka elektiroonigga ah
o Biilka, korontada ama bayaanka bilowga-adeegga ee la soo saaray ama ku taariikheysan 30 maalmood gudahood laga bilaabo doorashada
– Telefoon, TV ama internet
– Qashinka adag, bulaacadaha, korantada, gaaska ama biyaha
– Bangiga ama kaarka amaahda
– Ijaar ama amaah guri
– Heshiiska kirada guriga ama heshiiska kirada oo ansax ah Maalinta Doorashada
o Bayaanka khidmadda ardayga ee hadda
Maxaa la sameeyaa haddii aadan diiwaangashanayn
Maxaa la sameeyaa haddii aadan diiwaangashanayn Soo qaado mid ka mid ah waxyaabaha soo socda.
Mid ka mid ah mabaadi’da wadista shaqadayda waxay ahayd Awoodsiinta Muwaadiniinta. Waxaa lagu dabaqi karaa ku dhowaad urur kasta, ganacsi, ama dowlad kasta. Si fudud haddii loo dhigo, macnaheedu waa muwaadiniinta celceliska ahi waxay leeyihiin awood waxayna ka qaybqaadan karaan go’aamada. Waxaa jira saddex heer ama tallaabo. Qeybta hoose waa khalkhalgelinta nadiifka ah. Kuwa awoodda ayaa kuu sheegi doona wax kasta si aad u hesho u hoggaansamid. Heerka ku xiga waa calaamado. Si kale haddii loo dhigo, waxaa lagu siiyaa xoogaa door ah oo aan qiimo lahayn si ay kuugu fiicnaato laakiin ma lihid awood dhab ah oo aad wax ku beddesho. Xagga sare waa awoodsiinta halkaas oo qof kastaa qayb ka yahay kooxda go’aan qaadashada, oo ka wada hadli kara, ka gorgortami kara, ugu dambayntiina go aan ka gaari kara tallaabada la qaadayo. Waxay kaloo tilmaamaysaa qaadashada mas’uuliyadda go’aannadaada iyo ficilladaada. Waxaan ku kalsoonahay dadka inay gaaraan go’aano wanaagsan markay si fiican u war qabaan oo aanan ka baqaynin inaan su’aal ka keeno ficil kasta oo aan u beddelo habab haddii loo baahdo. Waxaan ku maareeyay fikradaha qalafsan ee mashaariicda horumarinta, barida iskuulka, iyo ganacsiga. Waxaan qaataa waqti si aan isugu xiro dhammaan dhibcaha si aan u helo sawir buuxa oo xaalad ah intii suurtagal ah. Ka dib waxaan dhigayaa dhacdooyin badan oo mustaqbal ah oo aan ku salayn karo macluumaadkaas ku socda jihada aan doonayno.
Waxaan ku jiraa jiil bilawday waxyar uun ka dib Dagaalkii Adduunka ee ugu dambeeyay. Waalidkey waxay ogaayeen waqtiyada adag ee boodhka boodhka iyo murugada iyo qiyamka muxaafidnimada. Waan daawan kari waayey “Waan jeclahay Lucy” sababta oo ah shirqoolka shuuciga ah! Waxaan ku koray beer turkey ah oo ku taal dooxada webiga Minnesota ee aabahay ku iibsaday iyadoo $ 200 hoos loo dhigayo. Waxaan ahay canugga qoyska oo leh 2 gabdhood oo walaalo ah oo iga weyn iyo 1 walaal iga weyn oo dhammaantood iga weyn 10 sano. Waxaan lahaa adeer iyo ilma adeer oo ahaa adeegayaal iyo kuwa kale oo dabeecad shaki leh, sida qoysaska badankood ee aan aqaano. Waxaan aaday Dugsiga Dadweynaha ee Renville waxaanan ka qalin jabiyay meel u dhaw dusha sare ee fasalka 45 arday. Waxay ahayd waqti fiican… cayrsashada turkiga; kooxaha koorsooyinka; tusmooyin muujinaya; beeraha falashada; iyo barashada beeraha iyo hogaaminta iyada oo loo marayo FFA… oo ku dambaysay Qasnajiga Gobolka FFA.
Waxaan ku koray qiyamka muxaafidka ah work shaqo adag, daacadnimo, daacadnimo, feejignaan, is-hoosaysiin, naxariis iyo rabitaan ah inaan dadka u adeego. Waxaan nasiib u helay inaan ka faa’iideysto fursado isdaba-joog ah oo is-tusay. Uma maleyneynin waqtigaas in horumarka ama kuwa aan Masiixiyiinta ahayn ay yeelan karaan isku qiimo. Dunida oo dhan waxaa maamuli jiray saddex hay’adood… Ilaah, Ibliis iyo Shuuciyaal. Waxaan ku jirnay garabka Ilaah.
Laakiin epiphanies badan noloshayda oo dhan waxay igu hogaamisay inaan fahmo qiyamkaas. Waxaan aaday Gustavus Adolphus College. Waxaan u maleynayay inaan doonayo inaan noqdo aqoonyahan badeed ama cilmi-nafsi yaqaan illaa aan Japan tago lix bilood. Waxaan bartay dhowr cashar oo waaweyn muddadan. Midka koowaad waa inay jiraan dad ku dhibaateysan adduunka oo dhan oo u baahan caawimaad.
Marka labaad, waa inaan masuuliyad iska saarnaa kaliya ficilkeena shaqsiyadeed laakiin kuwa dadkeena (qaran, diin ama qowmiyadeed). Taasi waxay igu kaliftay inaan u wareego Jaamacadda Minnesota, anigoo ka qaatay shahaadooyinkeyga (BS, MA iyo PhD) ee Cilmiga Beeraha.
Waxaa la iigu tala galay inaan wax ku baro Grygla, MN markii saaxiib fiican iisheegay Lutherans waxay raadinayaan nin beeraley ah oo hadaf cusub leh. Waxaan ku dhammaaday Senegal halkaas oo aan kula noolaa reerkaha lo’da ahbadan leh ee Peul muddo 3 sano ah aqal caws ah. Waxay ahaayeen muslimiin cibaado badan waxayna igu soo dhoweeyeen beeshooda, inkasta oo aan kaniisadda u shaqeeyey. Waxaan bartay in maalkoodu yahay xaaladda wadnahooda. Way igu soo dhoweeyeen tuuladooda iyo bulshadooda.
Waxaan kula kulmay xaaskeyga, Lucie, magaalada Bakel, ee dalka Senegal. Waxay ahayd aqoonyahan u dhashay Faransiiska. Lucie waxay ahayd saaxiibkadeygdii ugu fiicnaa, lammaanahaygii iyo jaceylkaygii wuaxuuayna igula xiriiray dhamaan himilooyinkii iyo dhibaatooyinkii nolosheena. Waxaan leeyahay qoys faransiis ah oo qurux badan oo fanaaniin ah, cilmi baarayaal iyo dad fiican oo shaqeeya. Waxaan ku leenahay France gabar iyo laba ayeeyo iyo awoowo unahay.
Jidkaygu wuxuu dhex maray dalal badan anigoo dhammeysanaya labo shahaado oo dheeraad ah Jaamacadda Minnesota. Rwanda, Montenegro, Macedonia iyo Kenya ayaa taagan. Waxaan ku qaatay 3 – 8 sano wadan kasta.
Ruwanda, sidaad ogtahay, waxay la kulantay xasuuq ba’an oo ay ku dhinteen in ka badan hal milyan oo qof. Qaar badan oo ka mid ah waan garanayay labada dhinacba. Waxaan joogay 5 sano kahor, iyo 3 sano kadib xasuuqii oo kashaqeynayay 300 iskuul xasuuqa kahor kadibna mashruuc caano ah oo lalasocday Land O’Lakes dilki kadib. Astaanta labada mashruuc waxay awood u siineysay macalimiinta iyo beeraleyda inay gaaraan go’aanadooda.
Montenegro iyo Macedonia (jamhuuriyadihii hore ee Yugoslavia) waxay xisaabtameen 7 sano oo kale oo noloshayda ah. Aragtiyadaydii carruurnimo ee shuuciyadii xumaa ayaa uumi baxay markii aan la kulmay dadka dhabta ah. Weligay lama kulmin dad marti-gelin ka badan. Waxaan ka abaabulnay iskaashatooyin Montenegro ah oo xubnaha dusha ka saaraya, mana ahayn madaxda xisbiga ama kuwa ugu caansan. Macedonia, macalimiinta iyo ardayda waxay abaabuleen hareeraha barnaamijyada xirfadeed ee iskuuladooda waxayna la wareegeen hagaajinta manhajkooda iyo natiijooyinka. Waxaan adeegsanay qaabka FFA, wuuna shaqeeyey!
Kenya waxay ahayd waqti layaableh, oo lataliye kala noqotay USAID iyo Safaaradda Maraykanka. (Waxaad xasuusan kartaa qaraxii safaarada ee Nairobi 1998 oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof.) Intii lagu guda jiray doorashadii 2007-8, dhalinyarada (18-36 sano jir), waxay labaduba ahaayeen dambiilayaashii iyo dhibanayaashii dilka ee dhex maray. qowmiyadaha, oo ay kiciyeen siyaasiyiin. In ka badan 1200 oo qof ayaa la diley. Waxaan dib u jaleecnay waqtiga si aan u helno markii beeraleyda iyo muwaadiniintu ay isu yimaadeen si ay ula kulmaan cadaalad daro dhaqaale iyo mid bulsho iyagoo abaabulay coops iyo ururo. Ku haynta awooda go’aan qaadashada ee ku xidhnayd bulshada waxay fure u ahayd kobcinta fikradahooda iyo kalsoonida loo baahan yahay si dib loogu habeeyo nidaamka burburay. Waxaan ka caawinnay Kenyanka inay isku abaabulaan 22,000 tuulo oo ku baahsan dalka oo dhan waxaana ka caawinnay inay samaystaan ​​30 ururada amaahda ee heer gobol iyo heer qaran. Waan ku faani jiray inaan iraahdo waxaan ahaa Mareykan walina waxaan ixtiraam u hayaa dhalinyarada aan lashaqeynay waxaana hoos udhacay geesinimada kuwii nagahoreeyay oo ku dhiiraday inaan xukunka lawareego si loo sameeyo “midow kaamil ah”
Si aan u soo afjaro waaya-aragnimadayda dibadeed, waxaan 5 bilood ku qaatay Jabuuti ka dibna Falastiin waxaan ka waday barnaamijyo tababarro xirfadeed iyo macallinimo. Waxaan sidoo kale ka shaqeeyay muddo gaaban Sri Lanka iyo Lubnaan. Jabuuti waxay ku leedahay saldhiga militari ee ugu weyn Mareykanku bariga dhexe. Falastiin ayaa gaabinaysa Daanta Galbeed iyo Qaza. Waxaan ku noolaa Ramallah oo 20 mayl u jirta Yeruusaalem. Anigu kuma aan jirin saldhig militari ama saldhiga diblomaasiyadeed ee kaliya waxaan la shaqeeyey dadka caadiga ah ee dabaaldega oo u dhibtooda sida annaguba. Aragti ka duwan tan warbaahinta wararka ama siyaasiyiinta.
Ugu dambeyntiina, in la xisaabiyo ilaa 10 sano and aniga iyo Lucie waxaan bilownay sameynta jiis caano ah oo qaas ah. Waxaan dhisnay silsilad qiimo dhan oo bilawday qorista beeraleyda inay caano kaxeeyaan oo kudhamaadaan farmaajo macmal ah oo laga adeegto qaar kamid ah huteelada iyo maqaayadaha ugufiican wadanka oo dhan xitaa waxaan kadhignay miiska caleema saarka Madaxweyne. Waxaa laga yaabaa inaad nagu soo aragtay carwadii Gobolka intii lagu guda jiray iibinta caano adhi caano fadhi caano fadhi iyo jalaato. Waxaa naloo geliyay Guild Faransiiska Cheesemakers ’.
Isla waqtigaas, waxaan wax ka dhigayay farsamada beeraha farsamada gacanta degmooyin dhowr ah oo ku teedsan Minnesota. Kuwaas waxaa ka mid ahaa Nicollet, Duluth, Little Falls, Austin iyo Renville. Minnesota sifiican ayaan u aqaan.
Aniga iyo Lucie waxaan howlgab noqonay 2 sano ka hor.
Waxaan jecel nahay dadka ku nool aaggan waxaanan aaminsanahay inaan haysanno qalab xirfadeed iyo faham oo u adeegi doona dhamaan bulshada halkan ku nool. Kulligeen waan ka fiicanahay markaan is ixtiraamno oo ugu muhiimsanna aan ka takhalusno nacaybka oo aan diiradda saarno sidii aan u wada dhisi lahayn beel wadajir ah. Waxaan rabaa inaan noqdo codkaaga Guurtida.
ARIMAHA MUHIIM AH:
1. Daryeelka caafimaadka waayo qof waliba waa xaq, mana aha mudnaan. La awoodi karo wax macno ah kuma lahan kuwa looga tagay nidaamka sababo la xiriira xaalado horay u jiray, jaritaanno badan, ama wada-bixinno. Umad kasta oo warshadeed (iyo kuwa ugu badan ee soo koraya) waxay daryeel caafimaad u fidiyaan dhammaan muwaadiniinteeda iyaga oo aan ka khasaarin kalabar qiimaha aan hadda ku bixinno. Waxaa intaa dheer, waxaan haynaa natiijooyin sabool ah. Yaan laydin khiyaanayn, waan awoodi karnaa. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku dhawaaqnay inaan u soconno dayaxa markaan haysan wax tilmaam ah sida loo tago halkaas. Waan ogaanay. Oo halkan waxaan ku haysannaa faa’iidada waddan kasta oo warshad leh oo leh.
2. Waxbarashada ayaa lagama maarmaan u ah inaan u xuubsiibno bulsho rayid ah oo midaysan oo qof walba uu ka faa’iideysan karo waxbarasho wanaagsan. Waxbarashada guud oo loo siman yahay waa furaha. Wadamada horumaray ee warshadaha leh waxay hubiyaan in qof walba uu haysto fursad siman oo wax looga barto laga soo bilaabo dhallaanka ilaa qabriga. Waa wax caadi ah oo aan ahayn xarun faa’iido ganacsi. Waxbarashadu waa inay noqotaa mid la awoodi karo qofkasta oo raba inuu sii wado waxbarashadda dugsiga sare ama tababarka. Iskuuladeena waa in loo maamulaa sidii xarumo wax barasho halkaasoo macalimiinta lagu xushmeeyo laguna siiyo hanaan ay wax ku qabtaan.
· Maalgeli waajibaadka aan la bixin ee la siiyay dugsiyada. Ku siiso lacagta waajibaadka adeegyada sidaa darteed SAU iskuulkiisa kuma qasbana inay kor u qaaddo canshuuraha aftida ee u baahan waqti iyo waqti badan maamulayaasha iyo xubnaha bulshada. Jamhuuriyeyaashu (Mr. Jasinski) waxay ka buuqeen sida ay u gaarsiiyeen koror 1% ah maalgelinta dugsiyada. Waxaan u baahanahay inaan xasuusano kaliya waxay soo jeediyeen in 0.5% lagu kordhiyo wadahadalada halka Dimuqraadiyiintu ay la yimaadeen koror 3% ah (tani waxay ahayd waxa iskuullada degmadu sheegeen inay u baahan yihiin). Marka aan daacad ahaano. Golaha guurtida ayaa laaday dariiqa wadada, taas oo ka dhigaysa in iskuulada degmooyinku ay wajahayaan culeys kale oo halis ah si mar kale canshuuraha kor loogu qaado. Dhanka kale, waxaa looga baahan yahay inay gutaan waajibaadka laga soo wakiishay sharci dejinta waana inay weeraraan dhaqaalaha guud ee lagu daboolayo barnaamijyada. Tani waa mid aan la dafiri karin oo waxaan u baahan nahay inaan yeelano aragti dhameystiran oo ku saabsan macnaheeda.
· Dib u habeyn ku samee qaacidooyinka maalgelinta si waxbarashada looga dhigo mid loo siman yahay iyadoon loo eegin saldhiga canshuuraha ee degmada dugsiga. Degmo dugsiyeedyadu waxay leeyihiin saldhigyo canshuur oo aan sinnayn oo midkood kobcinaya ama xaddidaya maalgelinta degmo dugsiyeedyada maxalliga ah ee ay ku aruurin karaan canshuuraha. Tacliintu waa inay ahaato mid loo wada siman yahay waxaan ubaahanahay inaan si siman u ciyaarno ciyaarta sidaa darteed caruurta ku nool degmooyinka leh saldhigyada canshuuraha ee liita waxay leeyihiin fursad la mid ah tan degmooyinka nasiibka badan ee ku dhaca inay helaan ilo dakhli oo ka maqan degmooyinka saboolka ah.
· Waxbarashada gaarka loo leeyahay waxay leedahay door muhiim ah oo la ciyaaro, laakiin kuma xirna iskuulada dowladda. Tacliinta guud waxay dejisaa heerka heerarka waxbarasho. Foojarka ayaa dhiig ku daadinaya nidaamka iskuulada dowlada ee lacagaha marka iskuuladu halgamayaan. Waxaan u baahanahay inaan taageerno waxbarashada dadweynaha, oo aan burburin. Taasi waxay ka dhigan tahay in la siiyo fursad horumarineed oo xirfadeed macallimiinta oo ay ku xigto maalgelin ku filan fasallada yaryar iyo bixinta agab waxbarasho oo loogu baahan yahay si guul leh wax loogu baro carruurteenna. Dugsiyada Dadweynaha maahan inay noqdaan xarumo macaash ama xarumaha wacdinta ururada diinta. Sidoo kale iskuulka lagu dhigto ee waalidiinta aan u qalmin maaha ikhtiyaar. Waalidiintu had iyo jeer way awoodaan inay ka baxaan waxbarashada dadweynaha laakiin waa inay awoodaan oo keliya inay sidaa sameeyaan haddii waxbarashada kale ay buuxiso heerar u dammaanad qaadaya hay’adda ama gurigu inuu la kulmo heerka ugu hooseeya ee waxbarista si ilmuhu u helo fursad loo siman yahay inuu ku kobco bulshada. Lacagta cashuur bixiyeyaashu waa inay aadaan iskuulada dawlada ee leh hadafka iyo macnaha siinta waxbarasho aad u fiican caruurteena iyo jawi ay caruurtu ku barbaaraan. Hay’adaha gaarka loo leeyahay waxaa loogu talagalay kuwa nasiibka leh iyo xarumaha diinta ee aaminka ah. Iskuulka lagu barto waa ikhtiyaar. Dhammaan waa inay la kulmaan heerar isku mid ah macallimiin shati haysta oo dammaanad qaadaya mustaqbalka carruurteenna.
· Taageer dugsiyada markay dhex socdaan jawiga cusub ee COVID-19 iyo wixii ka dambeeya. COVID is not unique. COVID maahan mid gaar ah. Waxaa nalooga digay cudurrada faafa muddo tobanaan sano ah. COVID waa khayaano gaar ah mana aha hargabka caadiga ah. Sida maalgelinta oo kale, iskuulada looma maalgeliyo si isku mid ah mana laha heer isku mid ah karti ay ku wajahaan xaaladda. Ma jiro wax dhaqso ah oo lagu hagaajiyaa. Kuwa soo maray dib-u-habeyntii waxbarasho ee la soo dhaafay, waxaan ognahay inay qaadanayso sannado si loo sameeyo nidaam cusub oo waxbarasho oo la hirgelin karo. Ma jiraan wax hagaajin deg deg ah. Macalimiinta iyo maamulayaasha iskuulka ayaa ku mashquulsan sidii markabka uu u sii socon lahaa oo ay u qalmaan taageerada anshax iyo dhaqaale. Kireynta iyo ka-fekerka waji-furka iyo haddii carruurtu u baahan yihiin inay dugsiga dhigtaan iyo inay dibadda u baxaanba waa inay ahaadaan kuwa ay u qabtaan nolol maalmeedka. Waxa ugu yar ee aan sameyn karno waa inaan ku taageerno dadaalkooda. Waa inaan sidoo kale helnaa maalgalinta lagu taageerayo wadaagida dadaallada. Uma baahnin sariirta sariirta lagu soo celiyo. Ma noqon doono masiibo ugu dambaysa oo ku noqosho sidii aan ahayn ikhtiyaar uma aha. Waxaan wali baraneynaa cawaaqibka fayraskan dilaaga ah.
3. Beeraha hubi in beeraleydu leeyihiin habab ay ku guuleystaan: Beeraleydu waa maamulayaasha dhulka. Waxaan u baahannahay inaan u dhaqaaqno dib-u-nooleyn, beero waarta. Waxaan haynaa saynis iyo teknolojiyad aan caadi ahayn oo nagu hoggaamin kara jihadaas inta aan nolol ku noolaan lahayn. Waa inaan odorosaa siyaasad halka wax soosaarku uusan ahayn boqor laakiin sida uu dhigayo Caqiidada FFA (Waxaan ahaan jiray Hanti Dhowrihii Hore ee Gobolka) “Waxaan aaminsanahay… awooda beeraleyda horumarka leh inay u adeegaan dantayada iyo danta guud ee soo saarista iyo suuqgeynta wax soo saarka dalkeena. daal. ” Ma sheegayo danaha shirkadaha.
· Dhaqanka beerashada dib u cusbooneysiiya ciidda kana dhigaya mid sii waaraya beeraha jiilalka soo socda waa lama huraan. Taageerida cilmi baarista ee xarumaha cilmi baarista guud waxay muhiim u tahay wada hadal hufan oo furan oo horseeda xalal beereed waara.
· Dhaqanka sharciyeynta waa inaan lagu go’aamin rabitaanka shirwaynaha oo ah gacan ku haynta danaha shirkadaha, laakiin waa rabitaanka dadka iyo sayniska. Waxaan soo aragnay faa’iidooyinka iyo aafooyinka kiimikada iyo wax ka beddelka hidda-wadaha beeraha. Labaduba waxay noqon karaan aalado cajaa’ib leh laakiin waxaan ka soo kabaneynaa dhibaatada illaa dhibaatada. Su’aalaha daacadda ah oo la weydiiyo oo la baaro si jawaabaha loo helo. Waxaan aaminsanahay inaan dhamaanteen dooneyno biyo nadiif ah iyo cunto caafimaad leh. Teknolojiyada cajiibka ah laakiin hadalka leh. Waxaan u baahanahay inaan si daacad ah uga qeyb galno wada hadalka sida aan u soo saarno, u shaqeyno, una cunno cunno iyo wax soo saar si aan ugu noolaano nolol wanaagsan, ma ahan oo keliya inaan aqbalno dacaayadaha loo dhiibo si loo joogteeyo faa’iidada muddada gaaban.
· Amaahda dulsaarka yar ee beeraleyda yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxay muhiim u yihiin beeraleyda cusub ee bilowga ah ee Maamulka Maaliyadda Reer Miyiga. Sidoo kale, Barnaamijka Amaahda Soo-kabashada Musiibada ee MDA waa mid muhiim ah.
· Daryeelka caafimaadka waxaa lagu qiimeeyay walaaca koowaad ee beeraleyda badankood. Shaqo ku jirta saddexda shaqo ee ugu halista badan Ameerika, caafimaadku waa xaq. Daryeelka Minnesota waa tallaabo weyn oo dhinacaas loo qaaday.
· Shidaalka noolaha waa tallaabo dhanka nadaafadda deegaanka ah iyo u dhaqaaqidda xagga dhaqanka kaarboon dhexdhexaadka ah. Si aad u adag ayaa waxay siisaa suuq galleyda. Muddada fog, waxaan u baahan nahay inaan u dhaqaaqno dhanka siyaasadaha yareynaya raadadka kaarboonka beeraha in kasta oo ay qiyaastii tahay 10% Gaaska Green House-ka iyo silsilado badan oo kaarboon ah. Waan ka sii fiicnaan karnaa.
· Suuqyada quudiya beeraleyda dhulka. Qoysas badan oo beeraley ah ayaa dhaxlay dhulka dhowr fac. Iyagu waxay isu arkaan inay yihiin wakiillada dalka. COVID waxay soo bandhigtay daciifnimada silsiladaheena qiimaha. Waxaan dib uga fikiri karnaa oo dib ugu qaabeyn karnaa danta guud. Waxaan ubaahanahay nidaam cadaalad ku dhisan ee wax soo saarka kabista oo u adeega danaha beeraleyda iyo danta guud.
· Hawlo ilaaliya deegaanka isla markaana soo saara cunno caafimaad leh. Soosaarka iyo sugnaanta cuntada isma wada laha. Waa labadaba / iyo. Waxaan haynaa tiknoolajiyad aad u wanaagsan oo tan ka caawin karta xallinta tan. Soosaarayaasha iyo macaamiisha ayaa isku khilaafsan arrintan waxayna u baahan yihiin inay la yimaadaan faham guud oo dhowraya deegaanka soona saaraya tayada cuntada iyo wax soo saarka uu macaamilku dalbado.
4. Isbedelka Cimilada waa dhab oo waa xaqiiqo la xaqiijiyay. Waxay ahayd inaan ku baranno habka sayniska dugsiga fasalka. Tijaabi mala-awaal adiga oo adeegsanaya tijaabo oo aad u tagto halka ay indhuhu kuu horseedayaan. Xaqiiqooyinka waa la xaqiijin karaa. Waxay dib-u-dhig ku sameeyaan baaritaanka. Way adag tahay in la qiyaaso dhibaatada loo gaystay bulshada iyo dhaqaalaha ee ka dhalatay aafooyinka cusub, tahriibka tirada badan, gaajada, dagaalada ku saabsan kheyraadka iyo aagag aan waxba galabsan oo mar wax soo saar lahaa. Waxay caqabad ku tahay dadnimadeenna.
· Ka guurista tamarta ku saleysan kaarboonka Cusbooneysiinta sida shidaalka noolaha ayaa ah talaabo dhankaas ah. Waqtiga dhow, taageerida wax soo saarka ethanol waxay siisaa ilo nadiif ah oo tamar iyo dakhli bulshada beeralayda markaan u gudubno nidaamka tamarta dhexdhexaad kaarboon. Si taas loo dedejiyo, waxaan u baahanahay inaan joojino kabista kabista tamarta shidaalka markii aan u gudubno dhaqaalaha kaarboon dhexdhexaad ah. Sida aad u tagto dayaxa. Ma aanan haysan tikniyoolajiyad iyo lacag markaa. Laakiin aakhirkii, waxaan horay u qaadnay boodboodkaas weyn. Shaqooyinka wanaagsan waa in la helaa haddii aan maskaxdeena u dhigno.
· Siyaabaha waxqabadka leh ee loo yareeyo isticmaalka tamarta –Waxaan ku yareyn karnaa raadkeena kaarboonka teknolojiyada qoraxda iyo dabaysha oo aan wax ku ool u noqono isticmaalka. Barnaamijyada dhiirigeliya dhismaha tamarta tamarta leh iyo dib u habeynta dhismooyinka jira waxay abuuraan shaqooyin wanaagsan. Kaabista shidaalka shidaalka iyo nasinta qawaaniinta wasakheynta ayaa dib noogu celin doonta waqti markii webiyadu gubteen iyo sidoo kale indhahayaga qiiqa. Hadal aan dhammaad lahayn oo ku saabsan Heshiiska Cagaaran ee Cagaaran kaliya wuxuu shidaa xamaasad la’aan. Aan u degno ganacsiga oo aan dhisno adduun ka wanaagsan.
Awoowahayaga waaweyn dib miyay dib u eegi doonaan iyagoo ka cabsanaya aragtidayada iyo u huridda sidii aan u hagaajin lahayn meeraha mise waxay dib u eegi doonaan ceeb iyo xanaaq ay ka qabaan awoowayaashood oo burburiyey meerahooda iyo noloshooda dhowr sano oo dheeri ah oo hunguri iyo dhac ah halka ay ka dhigeen Ameerika Weyn naftooda iyadoon loo eegin cawaaqibka. Waxaan u baahanahay inaan taageerno dadka iyo ganacsiyada isku dayaya inay yareeyaan raadkooda kaarboonka.
Isbedelka cimiladu wuxuu saameeyaa dhinac kasta oo nolosheena ah laga bilaabo caafimaadka illaa gaariga aan wadno. Haddaan mustaqbalkeenna ku sii jirno, waan guuleysan doonnaa. Waxaan ku jirnaa xaalad kala guur ah, Mareykankuna waa dad xariif badan.
5. Caddaalad dhammaan waa qayb ballaadhan. Waxaan caadeysanay cadaalad daro udhaxeysa kooxaha midabka iyo dhaqaalaha, booliska, iyo fursadaha dhaqaale. Dhibaatooyinka caafimaadka bulshada ee COVID-19 iyo burburka dhaqaalaha ee soo socda waxay fursad u tahay dib-u-dhiska bulsho caddaalad badan Jamhuuriyeyaashu waxay hogaaminayaan dacwada si ay xaalka u sii ahaadaan.
· Mushahar Nool – Kordhinta mushaharka ugu yar ee $ 15. Ganacsiyo badan iyo dhir ayaa tan dhaafay. Caddaynta ayaa muujineysa in shaqaalaha la siinayo mushahar hufan waxay kicineysaa dhaqaalaha maxalliga ah waxayna ku dhex fureysaa bulshada iyagoo awood u leh inay helaan guryo hagaagsan ayna taageeraan ganacsiga maxalliga ah.
· Daryeelka carruurta … dadka ku jira shaqooyinka ugu yar ee mushaharka waxay leeyihiin carruur u baahan daryeel sida dadka kale oo kale. Markay waaliddiintu shaqeeyaan, carruurtu waxay u baahan yihiin daryeel la awoodi karo oo ay ka heli karaan waalidiinta. Ma awoodi karno inaan iska indhatirno carruurteenna. Bixiyeyaasha xanaanada cunugga ee maxalliga ah waa in lagu taageeraa si ay u siiyaan daryeel wanaagsan carruurta, gaar ahaan deegaanka COVID. In kasta oo qawaaniintu muhiim u tahay u hoggaansamida, haddana waa inaysan noqon naadi loo adeegsado bulshada saboolka ah ama laga tirada badan yahay.
· Fasaxa jirada ee qoyska oo lacag qaatay iyo fasax fasax ah – Maxaan ugu ciqaabaynaa qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee ku nool jeeg bixinta? COVID-19 daaha gadaashiisa ayuu dib ugalaabtay. Dakhliga soo gala iyo shaqaalaha lagama maarmaanka ah iyo qoysaskooda ayaa dhib soo gaadhay. In kasta oo lagu qasbay inay shaqo tagaan iyada oo aan la helin ilaalin sax ah, waxay ku dhacaan cudur aad uga sarreeya kan kuwa awood u leh inay is karantiimeeyaan Waxay la yimaadaan guriga COVID iyaga, iyaga oo qaadsiinaya kuwa ay jecel yihiin. Badanaa lama tijaabiyo mana jiraan baadi goob dhab ah oo lagula xiriiro dadka kale. Waxay awoodi karaan inay is karantiil karan sababtoo ah waxay ubaahanyihiin jeega mushaharka waxayna leeyihiin waqti yar oo mushaar ah ama aan lahayn. Waxay aadaan shaqada oo faafiyaan cudurka. Taasi waa mid aan lagala tashan karin.
· Dib u habeynta socdaalka Muhaajiriintu waxay u yimaadaan Mareykanka sababo dhaqaale, bulsho, iyo siyaasadeed. Warshadaha iyo beeraha waxay kuxiranyihiin shaqada soo galootiga. Shaqaalaha guryaha ka shaqeeya ma rabaan shaqooyinkan. Nidaamka hadda jira, baqdin galinta ayaa shaydaan galisay shaqaalihii lagama maarmaanka ahaa ee aan ubaahanahay si aan uga gudubno aafada iyadoo aan diidnay xuquuqda aasaasiga ah ee dadka Mareykanka oo dhami ku raaxaystaan. Haddii heerarka ay soo jeediyeen Jamhuuriyiinta la adeegsan lahaa qarni ka hor, waa la mastaafurin lahaa. Dib-u-habeynta ayaa fududahay haddii aan maskaxdeena saareyno oo aan dib u habeyn ku sameyno nidaamka si loogu oggolaado soogalootiga dadaalaya inay si buuxda uga qeyb galaan bulshada Mareykanka oo ay ku hamiyaan. Iyaga ayaa sifiican uga yaqaana qof walba waxa shaqo adag ay tahay iyo waxa looga jeedo ku noolaanshaha mushaharka ilaa jeega. Jinka xun ee jinniyada leh ee bulshooyinkan waa in la joojiyaa.
· Booliiska bulshada ma ahan Gobol Booliis. Dib uga fiirsashada sida aan u sameyno booliska ma ahan shar, hanti-wadaag ama wax kale. Bulshooyinku waxay codsanayaan door in laga gaaro go’aan gaarista. Taasi waa awoodsiin dhab ah. Si kastaba ha noqotee, muwaadiniintu waa dhibanayaal waxayna rabaan inay fikrad ka dhiibtaan sida loo sameeyo booliska, oo ay ku jiraan sida loo qoondeeyo dhaqaalaha. Taasi ma wax xunbaa? Markii beeluhu isu yimaadaan, ragga xun ayaa ka guura.
Macno ayey leedahay in jaaliyadaha la siiyo fursad ay ku go’aansadaan sida booliska loo sameynayo. Waxaan u qalabeyneynaa booliska sida milatariga oo kale. Layaab malahan inay udhaqmaan sidii militariga. Hareeraha fiiri. Yurub gudaheeda, bilays aan hubeysneyn ayaa gaaf wareegaya wadooyinka, inta badanna lugeynaya. Haa, waxaa jira kooxo SWAT ah oo loogu talagalay kiisaska daran. Markii ay Beljimku qabteen xubinta ugu dambeysay ee ka badbaaday argagixisadii 140 qof ku dishay maqaayada Bataclan Café ee magaalada Paris sanadkii 2015, wuxuu ku labisnaa qori gacmeed, laakiin waxay ka toogteen jilibka oo ay xabsiga u taxaabeen. Immisa kiis ayaa boolisku 7-20 wareeg ku shubay dad aan hubaysnayn? Hal kiis, cunug wuxuu sitay qori toyboonbolo ah. Aan joojino macno darrada. Ma jiro qof booliiska lacag u siinaya, laakiin dib u qoondaynta lacago taas oo ka dhigaysa booliisku dadaal boolis ay beeshu maamusho oo muwaadiniintu ku aaminaan askarta inay sameeyaan waxa saxda ah. Markii booliisku u adeegsado cabudhinta bulshada iyo fulinta rabitaanka dadka laga tirada badan yahay, waa khalad. Marka jar jumlada cabsida iyo dacaayadaha.Cuando se utiliza la policía para reprimir a la comunidad y hacer cumplir la voluntad de la minoría de élite, simplemente está mal. Así que corte el miedo y la propaganda..
· Guryo la awoodi karo. Bulshada dakhligoodui hooseeyo iyo beelaha laga tirada badan yahay ayaa laga tagay. Kirada ayaa sii kordheysa iyadoo mushaharka uu fadhiistouusan kordhin. Shaqo la’aanta ayaa cirka isku shareertay taasoo ka dhigtay dadka inay awoodi waayaan inay kirada iska bixiyaan. Amaahda ama waa la diidaa ama waxaa lagu oggolaadaa sicir dulsaar sareeya kuwa doonaya inay noqdaan milkiileyaal guri laakiin dakhligoodu hooseeyo. Jamhuuriyeyaasha (Mr. Jasinski) waxay ka walaacsan yihiin milkiileyaasha guryaha marka loo eego qoysaska la tuurayo. Mawduucu wuxuu marayaa caddaalad darrada nidaamka. Dadka aan la siinin mushahar nololeed ma awoodaan kirada ama amaahda si ay u horumariyaan xaaladdooda nololeed. Taasi waxay u wareegeysaa inay ka maqnaato daryeel caafimaad oo ay ugu baahan yihiin inay caafimaad qabaan oo ay shaqeeyaan. Waa meerto xun oo aan jabin karno.
IDhiirrigelinta la siiyay horumariyeyaasha si ay u dhisaan guryo la awoodi karo ayaa muhiim ah. Mabda’a NIMBY (kuma ahan ardaaga dambe) uma banaana in laga wada hadlo, in kasta oo Jamhuuriyeyaashu ay aqbaleen. Golayaasha deegaanku waxay u baahan yihiin inay ku talaabsadaan aagagga guryaha la awoodi karo. ” Gentrification ‘waa inuusan ka qaadin unugyo jaban, inkasta oo ay hoos u dhacaan. Unugyada cusubi waxay u baahan yihiin inay iswaafajiyaan awood u lahaanshaha kuwa burburay ama la beddelay.
Mareykanku wuu fiicanyahay markay muwaaddiniintu gacanta ku hayaan. Taasi waxay ka dhigan tahay dhammaanteen. Waxaan u baahannahay inaan saxno hal-ku-dhigga ah “hal dollar, hal cod”. Waxaa naloo aasaasay hal nin oo cad, hal cod. Waxay u xuubsiibatay “hal qof, hal cod”. Go’aan sameynta waa in lagu sameeyaa koox fara badan oo gacan-ku-dhiigleyaal ah oo ku xaraysan xarunta laakiin la wadaago qaybaha. Waxaan sameyn karnaa taas markii AAD laguu awood siiyo inaad gaarto go’aanno saameeya ladnaantaada. Su’aal maaha ma awoodi karnaa. Waan ogaan karnaa taas. Waxay sidoo kale kaa dooneysaa inaad waqti siiso si aad u kala soocdo dacaayadaha iyo buunbuuninta si aad u hesho xaqiiqooyinka. Taasi waa waxa dimuqraadiyadu kaa doonayso ADIGA. Haddii kale waxaan ku jirnaa naxariista daalimiinta ee 1%. Aasaasayaashii dalka ayaa si fiican u garanayey taas markii ay xadhiga ka jareen King George III..